Umshini we-Epp / Etpu / Epo
Imishini ye-Auto Epp / Etpu / Epo
Auto Eps Umumo Molding Machine
Umumo we-Auto Shape Molding Machine (Uhlobo Lokuphakama Olufanele)
Eps / Epp Isikhunta
Isesekeli se-Eps / Epp
I-Eps / Epp Raw Material Nomugqa Wokukhiqiza
Umshini we-Auto EPP / ETPU / EPO
Umumo Wokubumba Okuzenzakalelayo Nge-Vacuum
Umshini wokusika we-Block PSC2000-6000A
Auto Air Block Ukubumbela Machine PSB2000-6000F
1. Umshini onesakhiwo esiqinile.
2.Sebenzisa i-PLC bese uthinta ukulawula kwesikrini, ugijime ngokuzenzakalela.
3. Faka i-hopper eqinile.
4.Sebenzisa ulimi oluhlukile lokusebenzisa, okulula ukusebenzela abasebenzi.
5.Sebenzisa uhlelo lokudlulisa oluzenzakalelayo nesisindo.
6. Sebenzisa izingxenye ezisezingeni elifanele.
7. Kufanelekile ukwenza yomibili imikhiqizo yobuningi obuphansi.
Umshini wokuvimbela okuzenzakalelayo Umshini Wokubumba we-PSB2000-6000Z
4.I-vacuum esebenza kahle kakhulu yokwenza imikhiqizo esezingeni eliphakeme.
5.Sebenzisa ulimi oluhlukile lokusebenzisa, kube lula ukusebenzela abasebenzi.
6. Sebenzisa uhlelo lokudlulisa oluzenzakalelayo nesisindo.
7. Sebenzisa izingxenye ezisezingeni elifanele.
8. Kufanelekile ukwenza imikhiqizo ephansi kakhulu kanye nemikhiqizo ephakeme kakhulu.
3.Sebenzisa izinyawo ezinamandla ukufaka ipulatifomu efektri yekhasimende.
6. I-hopper emibili emile yokugcwalisa impahla ngokushesha.
Umshini wokubumba we-EPP
Ukwakhiwa kwensimbi okuqinile kucutshungulwa nge-annealing yokushisa okuphezulu, ukwelashwa kokushisa, indawo egqwalisiwe yi-sandblast futhi efuthwe ngopende olwa nokugqwala.
Uhlelo lokulawula lusebenzisa i-Japan PLC ne-English touch screen ukuze isebenze kalula futhi ikhiqize ngokuzenzakalela ngokuphelele.
Izingxenye zemishini esezingeni eliphakeme futhi ezinzile, njengama-valve esihlalo esi-German Burkert.
Ukonga amandla ngosayizi womshini odizayinwe kahle, imigqa yamapayipi ukubona ingcindezi esheshayo yomusi iyanda futhi iyancipha.
Ukuhamba okuphezulu kwe-hydraulic drive nge-cylinder kabili ye-hydraulic, okwenza umshini ugijime ngokuqinile futhi ukhiye ngokuqinile.
Umshini ungahlonyelwa ngohlelo lokwakhelwa ngaphakathi, futhi futhi kunokufinyelela kohlelo lwesikhungo sokuhlanza.
Igumbi lokudla okuphindwe kabili lokondla okusheshayo ukunciphisa isikhathi somjikelezo.
Ibhalansi valve for esitebeleni umusi ukulawula.
Imilenze yomshini ohlanganisiwe we-zinc uyazikhethela ikhasimende lokufaka umshini emhlabathini okhethekile.
Imilenze yomshini nepulatifomu kungakhethwa.
I-EPP (I-Polypropylene Enwetshiwe)
I-EPP (I-Expanded Polypropylene) iyinhlobo yokusebenza okuphezulu kwe-crystalline polymer / igesi ehlanganisiwe, nokusebenza kwayo okuhle kakhulu ukuthi kube ukuvikeleka kwemvelo okukhula ngokushesha kakhulu nezinto zokwambathisa. Ukusebenza Okumqoka 1.Ukufakwa kwamandla: ngoba imikhiqizo ye-EPP inesakhiwo esikhethekile se-bubble pore, ingamunca amandla avela ngaphandle kahle, futhi ingalwa nokucindezela kahle. 2.Recycling: Imikhiqizo ye-EPP ukuguquguquka okuhle kungasetshenziswa kaninginingi, hhayi ukuphuka kalula. Imininingwane Yezobuchwepheshe ...
Izici Eziyinhloko 1.Izixhobo zomzimba zisebenzisa insimbi enamandla ephezulu eboshwe ndawonye, ​​ngemuva kwenqubo yokushisa, ukucubungula i-sandblasting, ukuqinisekisa ukuthi umshini unesakhiwo esiqinile, ungatholi ukugqwala futhi wandise impilo yokusebenza komshini. Isilawuli sesikrini sokuthinta iSchneider. Yonke inqubo yokukhiqiza isebenza ngokuzenzekelayo. 3.Machine nge-high-pressure feed system, ukusuthisa isikhunta ngokushesha, umshini ungafaka ama-pcs angama-36 okugcwalisa izibhamu 4.Machine nge ...
SPY70 \_ 90 \_ 120 Ukuqhubeka kokuhlalwa okuqhubekayo
Izici Main 1.Feeding, expander, filtrating, wayichoboza, ezokuthutha kuya silos ngokuzenzakalela 2.With ukunwetshwa lokuqala nelesibili, okokuqala ukugcwalisa zamukele kudivayisi imvamisa ukuguqulwa yokudla, isiqinisekiso ukuzinza yokondla 3.Uniform, amagwebu uniform, amagagasi ububanzi ububanzi kuyinto 6 35g / l 4. Umgqomo wezinto ezibonakalayo ngaphakathi nangaphandle, okomisa umbhede oketshezi okwenziwe ngensimbi engagqwali, ukuze kugcinwe ukusetshenziswa okuhlala isikhathi eside nokusebenza okuzinzile 5.Idivayisi yokuvikela ugesi 6.Thola isivalo sokunciphisa saseJapan
SPJ50 \_ 70 \_ 110 \_ 130 \_ 150 \_ 160 Iqoqwana elizenzakalelayo le-EPS Pre-expander
Izici Main 1.Feeding, expander, filtrating, ezokuthutha silos ngokuzenzakalela 2.Steam uhlelo elawulwa ingcindezi ukunciphisa valve futhi engela isihlalo valve, ukuze kuzuzwe Ukushisa olunembile 3.Feeding uhlelo usebenzisa electronic uhlelo enesisindo, impahla level inzwa ukulawula, ukuze ukulawula umthamo wezinto ezinegwebu, ukuqinisekisa ukuthi ubuhlalu begwebu ngokulinganayo 4.Sebenzisa isilawuli se-PLC nesikrini sokuthinta, sifinyelele ekusebenzeni okuqondile okuzenzakalelayo kwemiphongolo ye-5.Feed eyenziwe ngensimbi engagqwali. Izakhi zikagesi, ama-valve ar ...
Umshini wokusika we-Auto Block PSC2000-6000C
Izici Eziyinhloko 1.Umshini ubandakanya zonke izinzuzo zomshini wohlobo oluthile, onesakhiwo esiqinile, isiguquli samandla amakhulu, imvamisa yokulawula isivinini sezimoto, njll. 2. Kususelwa ohlotsheni A Ukwanda kwemishini yokusika okuzenzakalelayo, futhi kusetshenziswe ukulawula imvamisa kwesivinini semoto namandla kagesi ukulawula idivayisi. Izintambo eziningi zisika ndawonye, ​​isivinini kanye nogesi ongaguquguqukayo.
Izici Eziyinhloko 1.Umzimba womshini usebenzisa amandla aphezulu weshubhu lesikwele nensimbi, ngesakhiwo esiqinile, ukubukeka okuhle 2.Umshini unedivayisi evundlile, eqondile, futhi yokusika, ukusika isiqondiso ezintathu 3.Umshini usebenzisa ukulawula imvamisa kwejubane lemoto, uhla olukhulu lwejubane ukuguquguquka, ukunyakaza okubushelelezi nomsindo ongaphakeme
Umshini wokusika we-CNC PSC2000-4000D
Izici eziyinhloko 1.Machine ifreyimu eyinhloko exhunywe ngensimbi eqinile nokufakwa okuhlukahlukene okukhethekile, ukunyakaza okuzinzile, ukulawula ngokunembile i-2.Machine isebenzisa ukunyathela imoto, ukuqinisekisa ukunyakaza okubushelelezi, isivinini silungise ngokuzenzakalela. Lo mshini ulungele ukusika ihluzo ezikhethekile, lawula ukunemba kuye ku-0.5 mm 3.Ukusetshenziswa komshini i-3 kw transformer, ngokusebenzisa i-electronic voltage regulator, amandla okukhipha ka-0-70 v adjustable, angafaka izingcingo ezingama-20, asike ama-PC angama-20 afanayo amaphethini ngasikhathi sinye 4.Umshini ...
Umphathi Wezentengiso Womnyango Wamazwe Omhlaba: UJohn Chen
UCel: + 86-571-63258187
Ngo-Okthoba ka-2019, inkampani yakwaWelleps ku ...